Free DSProFx Scalp EA - Best Forex EA si | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
HomeFree Forex EAsFree DSProFx Scalp EA
DSALFx Scalp ọkachamara Advisor na-a n'ụzọ zuru ezu na akpaghị aka Forex robot maka ahia ahia. Ihe ịrịba ama ndị ahịa na-adabere na ụfọdụ ndị na-egosi: Ntọala na-agagharị, Oscillator Stochastic, MACD, na ọkwa oriọna na usoro nke jikọtara na oge dị iche iche.
DSProFx Scalp EA Free - Concept, Timeframe and couple
DSProFx Scalp EA arụ ọrụ na M5 na M15 na isi ihe na-agbaso na-emekarị (karịsịa omume ndị dabeere na H1 na H4) na ọ na-arụ ọrụ ọ bụla. Ọ ga-arụ ọrụ nke ọma na ụzọ abụọ dị ala.
Enwere ike imeghe azụmaahịa na hedging na / ma ọ bụ ọnọdụ na-enyere aka (ọ dabere n'ọnọdụ ọnọdụ). Ọ bụrụ na ahịa dị n'ọnọdụ a na-ewu ewu, ọ ga-emeghe ọnọdụ dị iche iche iji bulie uru ahụ, mana ọ bụrụ na ahịa dị n'akụkụ ọnọdụ, ọ ga-emeghe ọnọdụ iji dozie azụmaahịa ahụ ruo mgbe ọ chọtara usoro “doro anya”.
A ga-emechi ndị ahịa ahụ (nrite uru) site na ịba ụba ego, na mgbe ụfọdụ, ha ga-emechi site na njedebe nkwụsị iji mezuo uru ahụ ma ọ bụrụ na ndị ahịa ahụ nọ n'ọnọdụ dị elu. Enweela uru zuru ezu ka a tụlere nhichapu na ọrụ.
Dị ka ihe echiche / algọridim pụtara, ọnọdụ ọnụọgụ azụ ga-abụ ihe nkịtị. Ya mere, ị ga-eji robot a naanị otu ụzọ n'ime otu akaụntụ n'ihi na azụmaahịa niile na-apụta site na nha nhatanha na uru uru nke akaụntụ azụmaahịa (n'ihi ọnụahịa ahịa nke ụzọ abụọ na ọgụ dị n'etiti "azụ" na "na-ere").
Iji jikwaa isi obodo gị, ị nwere ike mepee akụkọ dị iche iche ma gbasaa isi obodo gị. Mgbe ahụ ị nwere ike iji robot a dị iche iche ma ọ bụ oge. Nke a bụ ụdị nlekọta ego dị mfe ma dị mma.
Akara oke ahia (nza) ga-ejikwa nzere akaụntụ na njikwa ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ bụ onye na-ere 5, ọnụọgụ ahịa mbụ kachasị elu ga-abụ nkwụsị 0.01 maka ahia maka $ 1000 nke ziri ezi.
Maka usoro AutoLot, a ga-agbakọta ụda olu ahia (nza nzọụkwụ) dị ka otu ụzọ ahụ; olu ahia ga-abawanye nza 0.01 ma ọ bụrụ na uru ahụ ruru $ 1000. Ọ pụtara, ụzụ ahịa ga-abụ 0.02 nza ma ọ bụrụ na ugwo ahia ahụ ruru $ 2000.
Ntụle a tụrụ aro
Ntụle a kwadoro na iji EA a bụ $ 1200.
Jiri robot a na 5-digit ma ọ bụ 4-ọnụọgụ ọnụọgụ.
DSProFx Scalp EA Free - Ike
DSProFx Scalp EA enye ohere:
Iji chịkwaa ihe ize ndụ ahụ site n'ụdị abụọ dị iche iche nke azụmahịa na-atụkọtara ọnụ ziri ezi.
Ịgbalite olu ahia (dabere na ngụkọta na 1).
Iji kpachapu ihe ize ndụ kachasị elu (na% nke nha nhata) nke ahia ahụ.
Iji chịkwaa ndị ahịa site na ndokwa nke dị n'etiti ahịa.
DSALFx Scalp adịghị mkpa ntinye maka njedebe nkwụsị n'ihi na ọ nwere ọtụtụ njikwa nchedo maka akaụntụ ahịa. Ọ na-achịkwa ụda ahịa maka ahia ọ bụla, ebe dị anya n'azụ ahịa, ọ na-enwekwa oke ihe ize ndụ.
Onye ndụmọdụ ọkachamara DSProFx Scalp - parameters
BrokerDigits - onu ogugu nke ikpo okwu / ahia ahia. Enwere uzo abuo:
Ise_5: maka 5-ọnụọgụ ọnụọgụ
Four_4: n'ihi na onye na-agbazi 4
Dollar_perLot_perPip - ihe bara uru (na USD ma obu EUR - ego mbu) maka ahia nke otutu ngbako nke 1. Can nwere ike ịlele nke a na akaụntụ ngosi ma rụọ azụmaahịa nke 1, wee lelee nguzozi mgbe ọnụahịa na-ebugharị 1 pip. Enwere uzo abuo:
TenDollars_10: ma ọ bụrụ na uru bụ $ 10
OneDollar_1: ma ọ bụrụ na uru bụ $ 1
LotSetting - usoro ịgbakọ karịa azụmaahịa azụmaahịa mbu (nza) yana mmụba azụmaahịa. Enwere uzo abuo:
Standard: Lot = Akaụntụ Akaụntụ / 100.000
Nchedo: Lot = Akaụntụ Akaụntụ / 200.000. (Ndị a bụ ihe atụ nke ngụkọta maka onye na-agba 5-digit na Dollar_perLot_perPip = TenDollars_10.)
InitialLots - olu mbu ahia / otutu. Ọ bụrụ na ọ dị elu karịa oke nza ị ga-anabata (site na ngụkọta oge na-achịkwa), a ga-enwe mkpu.
AutoLot - bulie olu ahia / nwayọ nwayọ (akpaka) dabere na ngụkọta ọnụ (LotSetting).
Oke kachasị - kacha kwere na ọnwụ gbakọrọ site na pasent nke hara nhatanha. Mgbe ụfọdụ, mfu na-ese mmiri (nke ngụkọta ahịa) nwere ike iru pips 3000-5000 n'ihi mgbanwe ahịa ahịa.
Etiti oge - oge akara, nke EA na-agba. Kpụrụ dị mma: M5 na M15.
Ntughari ugwo nke ugbua nke EA
Onu ahia mbu nke mbu